android ဖုန်းများအတွက် Facebook မှာ Messenger ကို APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Facebook က Messenger ကို
Facebook မှာ Messenger ကို APK ကို
ချက်ချင်းသင်၏အသက်တာတွင်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ Messenger ကိုအစာရှောင်ခြင်း, အခမဲ့ဖြစ်ပြီး, မည်သူမဆိုထိ secure.- ။ သငျသညျမိတျဆှမြေားကိုရှာဖွေအမည်များသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုသုံးနိုင်သည်။
- နေရာတိုင်းကိုသုံးပါ။ Messenger ကိုအားလုံးမိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်က devices တွေကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ပင်နိုင်ငံတကာကလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်သည်!
- သင်ချင်တယ်သို့သော်ချိတ်ဆက်ပါ။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို Send, ဓာတ်ပုံဝေမျှ, ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုချတ်စတင်ရန် - Messenger ကိုအားလုံးကို။
- အဖွဲ့များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဆက်သွယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်အမီလိုက်သို့မဟုတ်အရောင်များ, အမည်ဝှက်, နှင့်အဖွဲ့ကိုဓာတ်ပုံများနှင့်အတူသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့အတွေ့အကြုံကို customize ။
- Call နှင့်ဗီဒီယိုသင်၏မိတ်ဆွေများ 1 chat: 1 သို့မဟုတ်အုပ်စုများဖြစ်သည်။ ဒါဟာက Wi-Fi ကို (မဟုတ်ရင်စံဒေတာစွဲချက်လျှောက်ထား) ကျော်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပင်အခြားနိုင်ငံများတွင်လူတို့နှင့်အတူ, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်ပြောဆိုပါ။
- ကိုယ့်ကိုယ်ပွောပွပါ။ စကားစမြည်မှအီမိုဂျီစတစ်ကာများနှင့် GIF များ Send သို့မဟုတ်သင့်တွင်ဗီဒီယိုချက်တင်များအသစ်မျက်နှာဖုံးများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်ပါ။
- ပျော်စရာအနုပညာနှင့်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများရိုက်ကူးပါ။ သငျသညျ, သင့် Day ကိုမှပြောဆိုမှုများ, ဒါမှမဟုတ်ပို့စ်လူတွေကိုသင်ကမှတက်နေသောအရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်နေရာပေးပို့, ကင်မရာလိပ်ဤကယ်တင်နိုင်ပါ။
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ Chat ။ သင်, သံသယစေအမိန့်အပေါ်စစ်ဆေးနှင့် Real-time ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
အဆိုပါ Messenger ကို App ကိုအတွင်းမှာပဲလုပ်ပါရန်အေးမြသောအရာ
ရဲ့အကောင်းဆုံးတဦးတည်းနှင့်အတူစတင်ကြစို့ - ဂိမ်း! Facebook အသုံးပြုသူများကသူတို့မိတ်ဆွေတွေကိုဆန့်ကျင်ဆော့ကစားနိုင်တယ်-built-in ဂိမ်းအတော်လေးတစ်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်ရေးပေးထားပါတယ်။ သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကတစ်ခုခုမျှဝေချင်လျှင်, သင်တို 15-ဒုတိယဗီဒီယိုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နှင့်သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်သူတို့ကို customize ။ သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏အဆွေတို့အဘို့ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တစ်ဦးက Facebook ပုံပြင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်ချက်တင်စာမျက်နှာတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဲဒါကို access နှင့်မျှဝေဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်လည်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လူသားစကားပြောလိုမဟုတျလော ကောင်းပြီ, bot တွေဟာပုအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ Chatbots, သငျသညျသတင်း updates များကိုပေးသင်တစ်ဦးကတော့ Uber တက္ကစီအမိန့်သို့မဟုတ်ပင်သင်၏အသိသာသည်အခြားများအတွက်ပန်းပွင့်အမိန့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! က "မှ" လယ်ပြင်၌ဒီ feature ဝင်ရောက်ဖို့, type ကို "bot တွေဟာ" ။ သငျသညျပုဂ္ဂလိကပြောဆိုမှုများမှ extensions တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကလူကြိုက်များသူတွေကိုဒီတော့အပေါ် Spotify, စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်နှင့်ပါဝင်သည်။
သင်တစ်ဦးရုပ်ပြောင်ပန်ကာရှိပါသလား သင်သည်သူတို့ပိုကောင်းတဲ့စကားများအစဉ်အဆက်တတျနိုငျသထက်သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖမ်းယူခံစားမိသလား? ကောင်းပြီ, တစ်ဦး supersize ရုပ်ပြောင်အမှတ်ဖြတ်ပြီးရဖို့သေချာသည်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်သင်ချင်ရုပ်ပြောင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ရှည်လျား-စာနယ်ဇင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားရောက်ရှိသောအခါ, လွှတ်လိုက်ပါ။ သငျသညျကိုလည်းရုပ်ပြောင်၏အသားအရေပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်ပင်သင်အထူးသဖြင့်မြတ်နိုးစုံမက်သောရုပ်ပြောင်မှအမည်များပေးနိုင်!
ပေးပို့ခြင်းနှင့်ငွေကိုလက်ခံရရှိသငျသညျက Facebook Messenger ကိုမှတဆင့်အတူတတျနိုငျသအခြားအရာဖြစ်၏။ ဆက်ကပ်အပ်နှံပေးချေမှု apps များအများအပြားထွက်ရှိရှိပါတယ်နေချိန်မှာသင်ကအစားပဲ Facebook သုံးစွဲမည်ဟုဆိုပါက, သင်တို့အဘို့ကိုတောင်းဆိုသို့မဟုတ်လာမယ့်စာသား input ကိုလယ်ပစ္စုပ္ပန်ဒေါ်လာစျေးသင်္ကေတပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုက်ဆံပို့နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများလည်းသူတို့ရဲ့ PayPal က account ကိုအသေးစိတျသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဒက်ဘစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးအဘို့, သင့်လက်ဗွေသို့မဟုတ် PIN ကိုထည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးအထိခိုက်မခံစကားလက်ဆုံနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာစာဝှက်ထားတဲ့ချက်တင်စတင်နိုင်ပါသည်။
Facebook က Messenger ကို Android အတွက် Facebook မှာ Messenger ကို အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို အခမဲ့ Messaging ကို
အောက်တိုဘာလ 28, 2018 မှာ 4: 20 ညနေ
ဒီ app ကို Battery ကိုအဘယ်သူမျှမ ..
ဧပြီလ 13, 2018 မှာ 1: 16 နံနက်
ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒီ app ကိုချစ်
Naitik Dhangar says:
မတ်လ 11, 2018 မှာ 1: 51 ညနေ
အလွန်ကောင်းတဲ့ app ကို, ငါသည်ဤ app ကိုကြိုက်တယ်